Nagu saabsan - Shanghai Theorem Chemical Technology Co., Ltd.
Shanghai Theorem Chemical Technology Co., Ltd, oo ku taal Shanghai, Shiinaha, xafiiska dhoofinta ee warshadda. Waxaan u heellan nahay oleochemicals, alaabooyinka ku-dheggan, iyo kuwa caafimaadka dhexdhexaadiya, Waxaan la leenahay nidaamka maaraynta tayada la oggol yahay ee ISO9001, nidaamka maareynta deegaanka ee ISO14001 iyo OHSAS18001, adeegga iibka oo dhameystiran, adeegga OEM iyo adeegga Customization.
Sanadihii la soo dhaafay, falsafadda "Talo-siinta Tayada, Tiknoolajiyadda la Hagayo", shirkaddu waxay soo saartay phosgene dareere saafi ah oo soosaara tetraisocyanate, TPPT (tetraisocyanate phenyl ester) wakiil daaweyn ayaa helay shahaado patent qaran oo allifaad leh oo leh No.99114032x.
Dhanka kale waxaan lashaqeynay warshad kutaala Jian, Gobolka Jiangxi, waxaan kudoodnay soosaarida dhirta, sida saliidaha lagama maarmaanka ah, kuwa dhexe ee daryeelka maalinlaha ah iyo kiimikooyinka dawooyinka qaarkood.
MAXAA LOO DOORANAYA ...
Qalabkayaga wax soo saar ee asaasiga ah waxaa toos looga keenaa Jarmalka.
Waxaan haynaa 30 injineero, 7 aqoon isweydaarsi wax soo saar, in ka badan 10 shatiyada Hal abuurka
3.1 Qalabka Aasaasiga ah.
waxay doorteen alaab-qeybiyeyaashayada si adag oo ku saleysan "Heerarka bixiyaha u-qalma" ee nidaamka maaraynta tayada ee ISO9001: 2000, Waxaan dejinay feylal ku saabsan faahfaahinta alaab-qeybiyeyaasha. Waxaan laba-baaris ku sameynaa alaabada ceyriinka ah ee geleysa bakhaarka illaa khadka wax soo saarka
3.2 Tijaabinta Alaabada Dhamaatay.
Imtixaanka caadiga ah ee qalabkayaga xirfadeed ka hor inta aan la xirxirin, habka bakhaarka adag iyo tijaabinta ka hor rarka, waxaan haynaa shaybaar kasta oo wax soo saar ah si loola socdo dhibaatada tayada.
4. Dhaqanka Shirkadaha
Summad sharaf leh ayaa lagu taageeray dhaqan shirkadeed. Waxaan si buuxda u fahansanahay in dhaqankeeda shirkadeed lagu abuuri karo oo keliya saamayn, ku dhexgalid iyo is dhexgal. Horumarinta shirkadeena waxaa taageeray qiimaheeda asaasiga ah sanadihii la soo dhaafay ------- Daacadnimo, Hal-abuurnimo, Mas'uuliyad, Iskaashi.
Waxaan ka sameysan karnaa iskudhaf ahaan macaamiisha codsi qeexitaan.
Waxaan sidoo kale bixinnaa adeegga kiimikooyinka soo-saarka, Maaddaama aan khibrad iyo aqoon u leenahay Shiinaha suuqa maxalliga ah.
Waxaan si kal iyo laab ah u rajeyneynaa inaan noqono lamaanahaaga ganacsi ee lagu kalsoonaan karo mustaqbalka fog.
Xulashadaada ayaa naga sii fiicnaan doonta!